Ibhonasi yeTikTok: I-TikTok Isimemezele Ukunikela Ngebhonasi | XperimentalHamid
I-TikTok ivuza abantu ngebhonasi ye-TikTok. Kusukela lapho kumenyezelwa onjiniyela balolu hlelo lokusebenza, abantu bebelokhu bebuza zonke izinhlobo zemibuzo.
Eminye yale mibuzo iyathakazelisa. Kule migqa elandelayo, kuzoxoxwa ngakho konke okuphathelene nebhonasi yeTikTok.
Liyini Ibhonasi yeTikTok?
Ungayithola Kanjani Ibhonasi yeTikTok?
I-TikTok ingelinye lamasayithi wokuxhumana nabantu athandwa kakhulu. Kunezigidi zabalandeli abasebenzisa leli sayithi ngenkuthalo. Kulaba basebenzisi, iTikTok ibahlinzeka ngomthamo wokuzijabulisa wansuku zonke.
Isayithi lokusingathwa kwamavidiyo amafushane linakho konke okwenza likwazi ukushaya ukulele nabasebenzisi. Abantu abavela kuwo wonke umhlaba banentshisekelo yokwabelana ngemizamo yabo ezintweni ezihlukile zokuzijabulisa.
Lawa mavidiyo ake abiwa anamandla okuwenza afike ohlwini lokuthrendayo. Ukusuka lapho kuqhubeke, lawa mavidiyo aheha ukunakwa kunanini ngaphambili.
Ukungeza kukho konke lokho, iTikTok imemezele ukunikela ngebhonasi kwabanye abasebenzisi. Lokhu kunikezwa kususelwa kumqondo wokuthi abasebenzisi bafeza imisebenzi ethile ukuze bakwazi ukufuna imiklomelo.
Lokhu kulula, kepha uyini lo mvuzo, nokuthi ungawuthola kanjani? Kulokhu okuthunyelwe, ngizokutshela konke odinga ukukwazi. Ngakho-ke ake siqale ngaphandle kokulibala.
I-TikTok ikuyo, futhi. Lesi sikhathi sinikeze amaTikTokers ithuba lokuthola umvuzo onjalo.
Hlobo luni lwemivuzo esikhuluma ngalo? Imiklomelo, kulokhu, iyimali. Imali iTikTok ethembise ngayo abasebenzisi ukuthi inesandla esanele ukwenza abantu badonsele phezu kwayo.
Kepha ukuthola leyo mali eyengeziwe kunezimo ezithile abasebenzisi okufanele bazifeze ngaphambili.
Okokuqala, abantu abafanelekela lo mklomelo kumele babe ne-TikTok ID. Okwesibili, abasebenzisi beTikTok abafisa ukubamba iqhaza kumele babe neminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala.
Enye into ephawulekayo: lo mklomelo unemikhawulo ethile yezwe. Isibonelo, kuthinta abasebenzisi be-Australia.
Umuntu onentshisekelo yokuthola imali ethe xaxa kumele enze ezinye izinto ngendlela efanele.
Ungayithola kanjani leyo mali futhi isimo sendawo sisebenza kanjani? Le yimibuzo ekhohlisayo, ngokungangabazeki. Kepha engxenyeni elandelayo yalokhu okuthunyelwe, ngizokucacisela konke.
Okwamanje usunomqondo wokuthi le bhonasi izoba yini. Ngikutshelile nokuthi le bhonasi izoba njani.
Konke sekushiwo, kunomsebenzi ophuthumayo wokuchaza izindlela umuntu angaba yingxenye yalo mcimbi futhi abe nesandla ekuzuzeni umklomelo wemali.
Abasebenzisi abafuna ukubamba iqhaza kumcimbi webhonasi weTikTok kumele babelane ngohlelo lokusebenza nabanye abantu. Lapho nje abantu okwabiwa kubo izixhumanisi futhi lowo muntu esayina ukungena kulolu hlelo lokusebenza, umthumeli uthola umvuzo wemali.
Lapha ungafunda Ingabe Isihlungi Esiphikisiwe Sinembile ku-TikTok Noma Cha?
Lesi yisimo, noma kunjalo. Umsebenzisi kufanele athumele isixhumanisi kubantu abahlala e-Australia. Uma noma yisiphi isakhamuzi sase-Australia sisayina sisebenzisa isixhumanisi esithunyelwe, umthumeli uthola ama- $ 5 amadola ase-Australia. Imali elula akunjalo?
Miningi neminye imiklomelo. Le miklomelo ilinganiswa ngamadayimane namarubi. Lezi ziguqulwa zibe yimali yangempela.
Abantu abaku-inthanethi - ikakhulukazi amaTikTokers - badubule bakwenza kwaba kukhulu.
Isikhuthazo semali esikhishwe yiTikTok sinamandla okwengeza amalungu amasha emphakathini. Ngenkathi wenza umphakathi ukhule, futhi kunikeza abantu ithuba lokuwina imali ethe xaxa.
Uma unentshisekelo yokubamba iqhaza kulo mcimbi, ungakwenza kalula.
Izigaba I-Tiktok Amathegi Ungayithola Kanjani Ibhonasi yeTikTok?, Yini Ibhonasi yeTikTok Imeyili kwemikhumbi